Ekpere ka onye bụbu m laghachi. ? Soro m laghachi azụ ma nwetaghachi onye mmekọ
Ekpere maka ndi m ha laghachite O nwere ike ịbụ nzọpụta anyị n’oge ndị ahụ ebe mmekọrịta dị.
Anyị nwere ike ime ka onye ahụ lọghachikwute anyị n’oge na-adịghị anya karịa ka a tụrụ anya na niile site n’ikpe ekpere ọtụtụ mmadụ yiri ka ọ dị nfe mana ọ dị ike.
Site na ekpere a anyị ga - eme ka onye anyị na ya bibu meghachi omume mehie ma mekwaa ụta site n'obi nke ụlọ ọrụ anyị, ọ bụ mgbe ahụ ka anyị ga - ahụ ike na ịdị irè nke ekpere Ekepụtara mkpa nke mkpụrụ obi.
1 Ekpere maka ndi m ha laghachite
2 Ekpere ka mu na ndi nke m wee laghachite
3 Ekpere siri ike iji nwetaghachi di gị
4 Kpee ka Chineke weghachi di m
5 Kedụ mgbe m nwere ike ịrịọ ekpere ka ndị m ga-alọghachi?
Nke a bụ otu n'ime ajụjụ ndị a na-ajụkarị site n'aka ndị na-agụ akwụkwọ anyị.
Ka obi sie gi ike na ekpere di ike.
Anyị ga-egosi gị opekata mpe atọ maka ebumnuche dị iche. Ọtụtụ narị mmadụ nwalere ha niile.
Ha na-arụ ọrụ n ’ụzọ dị mfe, ngwa-ngwa ma dịkwa oke arụmọrụ. Naanị jiri okwukwe na-ekpe ekpere ma kwenye na ị ga-agba ọsọ nke ọma.
Ekpere ka mu na ndi nke m wee laghachite
Nke ahụ ọ na-alaghachi Site n'ike nke SAN CIPRIANO na SOULS atọ ahụ na-elekọta SAN CIPRIANO, CJCG ga-abịa n'azụ m.
MVBO ga-abịa chọọ, jikwa ịhụnanya juputara n'ịhụnanya, ịchọrọ ịlaghachi na ịrịọ mgbaghara maka ịgha ụgha na ịrịọ m na mbedo na emesịa na agbamakwụkwọ ngwa ngwa o kwere mee.
SAN CIPRIANO, aga m enwe ike ahụ na o chefuru ma hapụ nwanyị ọ bụla nọ n'isi ya ma laghachi weghachite m ma kwupụta onwe ya maka mmadụ niile.
SAN CIPRIANO pụọ na CJCG nwanyị ọ bụla, na ọ na-achọ m oge niile, TODAY na UGBU A, na-achọ ịnọ n'akụkụ m, na ọ nwere KPATARAINI M B AM M KWES WROM nwanyị maka ya, na CJCG enweghị ike ịdị ndụ na-enweghị m na CJCG mgbe niile. Kpoo ihe onyonyo n’uche gi oge niile.
UGBU A, N'AKA Ọ B,, Ọ B IT Ọ B,, Ọ ga-achọ M N'IHI KWES OFR OF HBARA N’AKA ya.
Ma n’oge ụra ị rọrọ m nrọ ma mgbe m tetara, ị na-eche maka m ma chọọ m, mgbe ị na-eri nri, na-eche m, mgbe ị na-azọ m, na-eche m, N’IME NKWUKWU ND YOUR ỌZỌ.
Nke ahụ chọrọ ịhụ m, nwee isi m, nwee mmetụ m na LOVE, na CJCG chọrọ ịmakụ m, susuo m anya, lekọta m, chebe m, hụrụ m n'anya 24 awa ụbọchị, na-eme nke a, na ọ hụrụ m n'anya kwa ụbọchị na ọ na-enwe obi ụtọ naanị ịnụ. olu m
SAN CIPRIANO na-eme CJCG ka m nwee mmetụta na-enweghị atụ, dị ka ọ na-esitụbeghị onye ọzọ ma ọ bụ na ọ gaghị enwe mmetụta
Na naanị ihe dị m mma, na agụụ naanị maka m, na anụ arụ naanị nke m, na ọ ga-enwe udo naanị ma ọ bụrụ na ọ dị mma.
Ana m ekele gị SAN CIPRIANO maka ịrụ ọrụ maka m, m ga - ekewa Aha gị ụgwọ ịkwụ ụgwọ CJCG ma weta ya n'ịhụnanya, ịhụnanya, raara onwe ya nye, raara onwe ya nye, ikwesị ntụkwasị obi ma jupụta n'ọchị m.
Iji weghachite ịhụnanya anyị, ịhụnanya anyị ma lụọ m dị ka o kwere mee.
A na m arịọ nke ahụ ka ikike nke ọchịchị ojii atọ dị na-ele anya bụ CIPRIANO. Amen.
Ekpere a ka m chụkwute m, siri ike.
N’oge anyị na onye anyị na ya na-akpakọrịta nwere nsogbu, anyị agatụghị eche na nke a ga-abụ ọgụ ikpeazụ, na mgbe oge ahụ anyị ga-agbanwe ndụ anyị n’ihi na onye nke ọzọ kpebiri ịhapụ anyị dịka ihe adịghị.
Ihe dị na ya bụ n’oge ndị ahụ oke iwe anyị anaghị echekarị ihe anyị na-ekwu ma anyị na-ahụ onwe anyị na-eme ọtụtụ mmejọ, ndị ahụ nwere ike ime ka mmekọrịta ahụ mebie.
Agbanyeghị, usoro a nwere ike inyere anyị aka ịghọta ihe anyị mejọrọ yana dịka anyị rịọrọ maka onye ahụ ya na ya biburu ka ọ laghachi na mmekọrịta ahụ, ihe dị mkpa bụ ime ya site na ịkọwapụta ihe niile nakwa na ekpere a nwekwara ike inyere anyị aka.
Ekpere siri ike iji nwetaghachi di gị
Senti Helena, eze nwanyị m hụrụ n'anya, ị tara ahụhụ nke ọ bụ mkpịsị aka atọ ị tara, mbọ aka atọ i nwetara, otu maka nwa gị nwoke Constantine, onye ọzọ si na mmiri nke osimiri ahụ wee nye ya ike na nchedo ya ugbu a. A na m ario ka ndi mmadu nke a nye m, ka ha kọọ ya na obi na uche nke (onye ịchọrọ), ka ọ ghara inwe udo n’ime obi ya.
M na-enye gị ahụ́ m na mkpụrụ obi m, (aha onye) Bịakwute m n’enweghị ihe ọ bụla na-ekewa anyị, n’enweghị ihe mgbochi, na ịchọrọ m n’anụ, n’ime mkpụrụ obi, na m ga-alaghachi ihere, na m ga-ada n’ụkwụ m, m ga-arịọ maka ohere ịnọnyere m, Saint Elena nyere m aka.
Saint Elena, ka ìhè gị bụrụ onye na-eduzi m n'ọchịchịrị a dị njọ m na-enwe, ka ụbọchị ọ bụla wee bụrụ onye na-eso m, onye bịara n'ịhụnanya dịka oge mbụ ọ hụrụ m, ana m ekwupụtara gị Saint Elena Ihunanya a, di ka nkita.
Eji ekpere a siri ike achoro ihunanya onye ahu, huru m n’anya, laghachitekwute m, senti di ike, a na m ario gi ka ih’anya n’ime ihunanya nke ihunanya gi, debe ihunanya a n’ihu m ozo.
Ugbu a Santa m hụrụ gị n'anya na ọ bụrụ na iweghachi ya n'akụkụ m, m ga-akwụsị (ihe masiri gị nke ukwuu) otu izu, yabụ ị ga - ahụ na ịhụnanya m hụrụ na ọ siri ike karịa, na osote ahụ, tụkwasịrị gị Santa Elena tụkwasịrị obi, tụkwasara m obi na obi m, tụkwasara gị eze nwanyị ịhụnanya, tụkwasịrị gị nwanyị ọ hụrụ n'anya, tụkwasịrị obi n'ịhụnanya anyị. ”
Kpee ekpere ka iweghachi onye gi na ya nweko okwukwe.
Ver nwetaghachi onye gị na ya bi na mbụ karịa ka ọ gwara gị ka ị laruo n’ụlọ, ọ bụ gbasara iweghachi n’echiche niile nke okwu ahụ. Enwere ike ịmaliteghachi ịhụnanya nke nwụrụ anwụ siri ike karịa ka ọ dị na mbụ.
Anyị enweghị ike ikpe ekpere maka ọdịmma onwe anyị, site n'ọchịchọ anyị itinye onwe anyị n'okpuru onye ọzọ ime ihe anyị chọrọ n'agbanyeghị ihe ọ bụla.
Nke a bụ Ekpere nke gha aghaghi iji obi bia, buru ụzọ ghọta ihe anyị onwe anyị mehiere na iji obi anyị dum rịọ mgbaghara ma wulite mmekọrịta ahụ na onye ọzọ ahụ na-enwe mmetụta ma ọ bụ dị njikere ime otu ihe ahụ.
Kpee ka Chineke weghachi di m
Oh Saint Elena nke obe, echefula m, Saint m, onye dị ike n'ịhụnanya, m na-abịakwute gị ịgwa gị, ịrịọ gị ma rịọ gị, ebe ị kwesịrị ịma na (aha onye ahụ) hapụrụ ụlọ n'ihi Nwanyi ozo, weta m ozo.
Saint Elena, mee ka m chee maka mbibi nke butere m iso nwanyị ọzọ gaa, echere m na ọ bụ whim, onye nwere ya maka agụụ, ahụrụ m ya n'anya site na obi m, mee ka ọ laghachite n'oge na-adịghị anya, sere ya nso, Echefula m, ihe ọ bụla m na-eme, akwụsịkwala iche banyere m.
Saint Elena nke obe, ịhụnanya m nwere n’ebe nwoke ahụ nọ hie nne nke ukwuu, enyere m ya ntorobịa m, afọ kachasị mma nke ndụ m, abụ m nne nke ụmụ ya, ihe mgbu na uju m nwere bụ nke ukwuu, ọ na-apụ ịdị jụụ mgbe m bịara dịka nwa atụrụ dị nwayọ ma na-arịọ maka ịhụnanya m.
Atụrụ m n’obi na ekpere maka ndị bụbu m na di m ịlaghachi ọrụ.
Alụmdi na nwunye bụ nkwekọrịta nke a na-ewere n'etiti mmadụ abụọ ruo ọnwụ Kewapụ ha, mana nke abụọ anaghị ahụkarị n'ihi na oge ọ bụla mmekọrịta ahụ nwere ike njọ ka mmekọrịta ahụ mebie ma gbaa alụkwaghịm.
Nke a bụ nsogbu nọ na-etolite n'ime ọha mmadụ yana n'etiti ndị lụrụ di na nwunye bụ ndị kwere ekwe.
N'ọnọdụ ndị a Ekpere a nwere ike inyere anyị ezigbo aka n'ihi na ọ na-enyere anyị aka ịghaghachi nwunye ahụma ọ bụ na ị chọghị ịga n'ihu na mmekọrịta ahụ.
N'obodo a na akuzi na atufu ihe na abaghi ​​uru, o di ike inwe ngwa oru ka anyi nwee ike ijigide alumdi na nwunye na ezi aru na aru.
Kedụ mgbe m nwere ike ịrịọ ekpere ka ndị m ga-alọghachi?
Enwere ike ikpe ekpere a mgbe ọ bụla ịchọrọ.
O nweghi oge nke ubochi ma obu izu nke izu.
Ihe dị mkpa bụ ikpee ekpere ka ndị m kpọghachitere na ọtụtụ okwukwe wee kwenye na ihe niile na-aga nke ọma.
Ekpere siri ike na Santa Muerte ka onye ahụ hụrụ n'anya laghachi
Ekpere siri ike wepu anya ojoo
Ekpere ka akporom taa
Nkebi ahịrịokwu Rockers